Arduino Oplà IoT Kit maka mmepe nke Ntanetị nke Ihe | Akụrụngwa n'efu
Arduino Oplà IoT Kit: ihe mmepe ọhụụ maka ịntanetị nke ihe
Arduino nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke dakọtara mmiri, na kwa ngwa mmepe na ihe niile ịchọrọ iji bido ma ọ bụ rụọ ọrụ Mee N'onwe Gị. Mana site ugbua gawa, ndị na-eme ya nwekwara ihe ohuru eji eme ihe oru IoT. N’ụzọ dị otu a, ị ga - enweta ihe niile ịchọrọ iji bido n’ ofntanet nke ihe.
Aka na ezigbo akwụkwọ akụkọ nke ihe nke ahụ ga-atọ gị ụtọ, nke ahụ bakwara uru maka ngwa niile ejikọtara yana ezigbo ụlọ ...
1 Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ngwa Arduino Oplà
1.1 Akụrụngwa Kit
Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ngwa Arduino Oplà
Ihe oru ohuru a maka Intanet nke Ihe, ma obu IoT, bu ihe ohuru maka Arduino. Ihe eji arụ ọrụ nke enyere aha ya Ngwa Arduino Oplà IoT na otu usoro nke ga - enyere gị aka imepụta ihe dị iche iche 8 na mpaghara a, yana nkuzi zuru ezu maka ịmalite ịmalite na ị nwere ike ịnweta gọọmentị webụsaịtị nke Arduino.
Ọrụ ndị ahụ kedu ihe ị ga-emepụta Naanị na nke a, ha na-esi na njikwa dị mfe maka ọkụ ụlọ, gaa na njikwa ọgụgụ isi nke usoro ịgba mmiri niile nke ogige, na-agabiga na ndị ọzọ dị ka ịme ihe na ịchịkwa usoro ọgụgụ isi ndị ọzọ, nchekwa, wdg.
El ọnụahịa bụ $ 99 ma dịworị na Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Arduino, n’oge a enweghị ike ịchọta ya n’ebe ọzọ. N’ọnọdụ a, ị ga-enweta, na mgbakwunye na kit ahụ n’onwe ya, na ndenye aha ọnwa iri na abụọ na Arduino Create Maker Plan. Nke ahụ na-enye ohere ịnweta Arduino IoT Cloud, na-enye ndị ọrụ ohere ịchekwa eserese na igwe ojii, mụbaa ọnụọgụ atụmatụ, ma nweta nkwado maka bọọdụ ndị ọzọ na ngwaọrụ LoRa, yana ụlọ na-akparaghị ókè.
Mgbe ọnwa iri na abụọ gachara, ndị ọrụ ka nwere mmasi ịga n'ihu na ọrụ ha ga-emegharị ndenye aha maka $ 5.99 kwa ọnwa (Ọ bụrụ na ịgbaghị ya n'ọrụ, ha ga-akwụ gị ụgwọ ozugbo).
Na usoro nke ihe mejupụtara Arduino Oplà IoT Kit, ị nwere ihe ndị a:
Isi ihe na ihuenyo LCD agba, ụdị ihe mmetụta dị iche iche, onye na-ahụ maka ikike, RGB LEDs, na ihe ndị ọzọ na njikọta.
Ọ gụnyekwara bọọdụ wiwi iji tinye mgbakwunye ikuku na ọrụ gị.
More sensọ, plastic ụlọ, na PnP (Plug & Play) Gịnị. All nke mere na oru ngo nwere ike mfe kpọkọta na-enweghị ka ịgbado ọkụ ihe ọ bụla.
para ozi ndị ọzọ, ị nwere ike ịhụ vidiyo a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Arduino Oplà IoT Kit: ihe mmepe ọhụụ maka ịntanetị nke ihe
PIR sensor: ihe niile ịchọrọ ịma